🥇 Accounting ee saadka
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 110
Fiidiyowga xisaabinta ee saadka
Dalbo xisaabinta saadka
Shirkadna si guul leh uma shaqeyn karto iyada oo aan la helin nidaam xisaabeed si hufan loo dejiyay oo ku saabsan dhammaan hannaanka la xakameynayo, shaqada la qabtay, dhaqdhaqaaqa bakhaarka iyo kharashyada ku baxay. Sida urur kasta oo kale, shirkad saadka ah waxay leedahay waxyaabo u gaar ah oo waxqabad ah, taas oo barnaamijka USU-Soft uu la qabsado dhibaato la'aan. Iyada oo gacan laga helayo softiweerkan, xisaabinta saadka ayaa ka soo jeesan doonta hawl iyo hawl adag oo loo rogi doonaa aalad gorfeyn dhameystiran, hagaajinta iyo hagaajinta howlaha jira.
Saadka, xisaabinta oo u baahan dejinta isbeddelada xogta waqtiga dhabta ah, waxay u baahan tahay cusbooneysiin joogto ah ee macluumaadka iyo la socoshada marxalad kasta oo amar fulin ah. Codsiga USU-Soft wuxuu bixiyaa cusbooneysiinta xogta hadda jirta iyada oo loogu mahadcelinayo qaybta barnaamijka Diiwaanada. Balooggan waxaa ku jira macluumaad loo kala saaray faylal: Lacag ayaa dhigata goobaha dhaqaalaha; adoo adeegsanaya galka Macaamiisha, waxaad kala socon kartaa soo noqoshada xayeysiinta iyo sameynta falanqaynta suuqgeynta; Ururadu waxay ka kooban yihiin dhammaan laamaha iyo liiska shaqaalaha shirkadda; waxaa sidoo kale jira macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan geeddi-socodka ganacsiga iyo aagagga waxqabadka, heerarka isticmaalka shidaalka, qiimaha adeegyada ee xambaarayaasha saddexaad. Qaybta Tusaha waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysato otomaatigga falanqaynta xogta iyo dhammaan noocyada xisaabinta xisaabinta saadka, taasoo gacan ka geysaneysa saxnaanta xogta iyo baabi'inta khaladaadka ku jira howlaha xisaabinta gacanta. Xisaabinta bakhaarka ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa saadka, iyo barnaamijka la soo jeediyay ee xakamaynta saadka ayaa gacan ka geysanaya in la dhiso howlo bakhaarro dhaqso leh iyo in waqtigii loogu talagalay lagu buuxiyo bakhaarada oo leh qalab dayactir loogu talagalay gawaarida. Xisaabinta hufan waxaa sidoo kale fududeeya nidaamka dukumiintiga elektaroonigga ah iyo ansixinta, kaas oo dhammaan dadka mas'uulka ah lagu ogeysiiyo imaatinka qoraalo adeeg oo cusub lana kormeerayo waqtiga howsha loo dirayo. Sidaa darteed, abaabulka habraaca gudaha ee shirkadda waa la hagaajinayaa.
Barnaamijka xisaabinta ee adeegyada saadka ayaa kuu ogolaanaya inaad aasaasto shaqo wax ku ool ah oo aad la leedahay macaamiisha adoo dayactiraya keydka macluumaadka macaamiisha, sameynta codsiyo gaadiid, raad raadin wax qabad, iyo sidoo kale xakameynta rasiidka lacagaha. Shaqada maareeyayaasha ee kormeerka dhow ee maamulku waxay ka dhigeysaa adeegyada gaadiidka mid aad u wanaagsan waxayna shirkadda siineysaa gees tartan. Xisaabinta macaamiisha saadka iyadoo la kaashanayo nidaamka USU-Soft ee xakamaynta saadka ayaa ah mid fudud oo dhaqso badan, halka aad ka heleyso qalab badan oo aad ugu shaqeyn karto keydka CRM. Qaybta Warbixintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala soo baxdo warbixinnada maaliyadeed iyo maareynta adeegyada la bixiyay, kharashyada dhacay, soo kabashada qiimaha, kantaroolka agabka iyo faa'iidada. Warbixinnada waxaa ku jiri kara garaafyo muuqaal ah iyo jaantusyo waana la soo saari karaa xilli kasta. Xisaabinta xagga saadka waxay siisaa fursado badan oo falanqeyn ballaaran oo ganacsiga ku saabsan, oo ay ku jirto macnaha cutub kasta oo gaadiid. Faa'iidada gaarka ah ee softiweerku waa awoodda si joogto ah loola socdo horumarka dayactirka: gaari kasta oo raxan raxan u socda wuxuu leeyahay xaaladdiisa iyo taariikhihiisa dayactirka loo qorsheeyay, baahida loo qabo taas oo ay ka digayaan barnaamijka maaraynta saadka. Marka, barnaamijka xisaabinta saadka wuxuu hubiyaa dayactirka waqtiga iyo hubinta xaaladda gawaarida, iyo sidoo kale helitaanka qalab hufan oo si habsami leh u fulinaya amarrada.
Nidaamka xisaabinta ee saadka ayaa ah aalad aad waxtar u leh oo lagu hirgelinayo qorshayaasha shirkadda iyo in la horumariyo habsami u socodka iyo nidaaminta tayada adeegyada. Barnaamijka xisaabinta saadka ayaa hawlgallada oo dhan nidaaminaya, macaamiishaaduna hubaal way ku qanci doonaan adeegyadaada! Nidaamka muuqaalka shaqadu wuxuu ku siinayaa sawir buuxa oo ku saabsan geeddi-socodka socda: dariiq faahfaahsan oo loogu talagalay gaadiid kasta, u diyaargarowga baabuurta, dhibcaha rarka iyo rarka, hawl-wadeennada loo xilsaaray, xisaabinta jidka iyo dhammaan kharashyada, iyo sidoo kale helitaanka rasiidhada lacagta macmiilka. Barnaamijka xakamaynta saadka ayaa xaqiijinaya horumarinta siyaasad maaliyadeed oo karti leh sababo la xiriira falanqaynta socodka lacagaha ee joogtada ah iyo qiimeynta waxtarka go'aamada maamulka. Halbeegga softiweerka shaqada ee dhammaan waaxyaha iyo qeybaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ilaaliso mas'uuliyadda sare iyo inaad xoojiso xogta hawlgalka shirkadda oo dhan.
Dabacsanaanta dejinta nidaamka, softiweerku wuxuu ku habboon yahay nooc kasta oo urur ah wuxuuna la qabsadaa waxyaabaha gaarka u ah waxqabadka. Xisaabinta bakhaarka USU-Soft waxay gacan ka geysaneysaa in si habboon loo buuxiyo tirinta iyo kaydinta alaabada qiyaas mug leh. Waxaad heleysaa liistada macluumaad dhameystiran oo ku saabsan cutub kasta oo gaadiid ah: lambarrada, sumadaha, milkiileyaasha, awoodda qaadista; sidoo kale waa suurtogal in la xareeyo dukumiintiyo, oo ay ku jiraan baasaboorro farsamo. Softiweerku wuxuu xasuusinayaa waqtiga la beddelayo dukumintiyada gaadiidka si loo waafajiyo sharciyada dejisan. Kaydinta noocyada elektiroonigga ah ee dukumiintiyada kala duwan ayaa sidoo kale suurtagal ku ah nidaamka (qandaraasyada, foomamka dalabka, qaansheegadka, kaararka shidaalka), iyo sidoo kale rarkooda degdega ah. Waad dejin kartaa nidaamyada dayactirka ee qorshaysan iyo kormeerida ku-meel-gaadhkooda. Falanqaynta faahfaahsan ee xisaabinta bakhaarka iyo qiimeynta abaabulka shaqada bakhaarada ayaa hubaal ah inay caawin weyn tahay.
Midabka iyo xaaladda kaladuwan ee qaybaha gaadiidka ayaa si cad u soo bandhigaya sawirka saamiga gawaarida ee dayactirka oo diyaar u ah in la isticmaalo. Isku-darka macluumaadka nidaamka xisaabinta ee websaydhka shirkaddaada ayaa la heli karaa, haddii loo baahdo. Waxaad la socotaa baabuur kasta: tirada joogsiyada, meelaha iyo waqtiga baarkinka, masaafada maalin kasta ee maalin kasta, iyo wargelinta degdegga ah ee macaamiisha. Waxaad awoodi doontaa inaad soo saarto warbixin ku saabsan shaqada shaqaale kasta oo aad ku qiimeyso waxqabadkiisa ama kartideeda iyo kartida uu ugu leeyahay inuu si wax ku ool ah u isticmaalo saacadaha shaqada.